Nei Vatengesi Vakawanda Vanoshandisa Infographics | Martech Zone
Isu takagovana akawanda infographics paMartech uye yakagadzira yakawanda yedu pachedu infographics yeblog, vatsigiri vayo uye nevamwe vedu vatengi. Izvi infographic kubva kuKutamba inobata kuti nei makambani ekushambadzira akapinda anoshandisa infographic… kusanganisira kuti anokwanisa kuita zvinhu zvakawanda, anobatana, uye anodzora.
Izvo hazvisi zvese, zvakadaro. Sezvo isu tinokudziridza infographics isu hatisi kungotarisa kuvaka linkbait. Isu tinoona kuti infographics inonyatso kuvandudzwa pavanobikira pasi yakaoma maitiro kana musoro wenyaya. Kuita izvi zvakajeka zvinowanzo nyore kupedzwa pane kuzvinyora mune refu posvo kana whitepaper. Uye vanhu vanovagovana zviri nyore nekuti ivo haudi kuve nekutsanangura musoro wenyaya, kana! Muchidimbu, iwo akakosha zvemukati zviri nyore kugovana nevateereri vako. Ndozvazviri kushambadzira zvemukati zviri nezve!
Uye kunyangwe kuwana chinongedzo kuri kukuru, hatisi kugara tichichida patinovagovanisa. Isu tinowanzo wedzera kufona kune chiito uye kumwe kushambadzira kutyaira traffic kudzokera kune webhusaiti yevatengi. Uye zvinoshanda!
Tags: inbound Marketinginfographicinfographic mabhenefitikuita
Kuwedzeredza: Natsiridza Kukanganisa kweMasocial Media Ads ako
Jul 20, 2012 pa 1: 28 AM
Ini chaizvo ndinofanira kuwana imwe nguva yekugadzira infographic, ndinoida idzi.